Hoteelada ugu wanaagsan Punta Cana Hoteelada ugu wanaagsan Punta Cana | Wararka Safarka
Mariela Carril | 08/07/2021 11:10 | Guryaha, Jamhuuriyadda Dominican
Mid ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee xeebta loo tago Bartamaha Ameerika waa Punta Cana, Meel ku taal Dominican Republic halkaas oo waxa ku badan yihiin quruxda dabiiciga ah iyo hudheelada. Waxay leedahay 32 kilomitir oo xeeb riyooyin ah oo leh hufnaan iyo biyo diirran iyo wax kasta oo qof doonaya inuu helo waqti fiican oo nasasho uu doonayo.
Aagga Punta Cana, oo ay weheliso Bavaro deriska ah, ayaa ka kooban waxa loogu yeero Xeebta Qumbaha waana halka ay ku yaalliin hudheelada ugu fiican Punta Cana. Ma rabtaa inaad raacdo lammaane, asxaab, qoys ahaan? Maqaalka maanta waxaad ku ogaan doontaa dhammaan hoygaas marka, markii aafadu dhacdo, waxaad heli doontaa wax kasta oo diyaar u ah inaad ku raaxeysato.
1 Hoteellada ugu fiican ee lamaanayaasha ku yaal Punta Cana
2 Hoteellada ugu wanaagsan ee qoyska ku yaal Punta Cana
3 Dhamaan Hoteelada Loo Dhan Yahay Punta Kana
Hoteellada ugu fiican ee lamaanayaasha ku yaal Punta Cana
Shaki kuma jiro in Punta Cana yahay mid ka mid ah meelaha loo doorto bisha malab. Meeshan kuleylaha ah waxay magnet u tahay lamaanayaasha cusub. Maxaa kafiican biyaha nadiifka ah, ciida cad iyo xulashooyinka madadaalada ee aadka ufiican?
El Neefsashada Punta Cana liiska ugu sareeya maanta. Waa dalxiis u gaar ah dadka waaweyn oo keliya, oo leh xasilloon, xeeb ciid-cad ah. Xulashada hoy ee ugu dhameystiran, Raaxada aan xadidneyn, waxaa kujira wax walba: laga soo bilaabo cuntooyinka suugaanta iyo khamriga, ilaa is biirsaday, barkadda dabaasha, adeegga xeebta, WiFi, bandhigyada, isboortiga biyaha iyo waxyaabo kaloo badan.
El Sivory waxaa qoray Port Blue Boutique Waa hudheel kale oo loogu talagalay dadka waaweyn oo keliya, laga bilaabo shan xiddigood qaybta. Dhawaan waa la dayactiray waxaana ku wareegsan qurux aad u dabiici ah. Waxay ku taal 40 daqiiqo oo keliya garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Punta Cana waxayna eegtaa badda Caribbean-ka. Waxaa ku jira isbooris iyo qolal ay ku leeyihiin balakoon gaar loo leeyahay.
Barkadda banaanka waa mid aad u weyn, waxaa ku yaalo garoonnada tennis-ka iyo xeeb gaar loo leeyahay oo aad snorkel ka dhigan karto. Intaas waxaa sii dheer, waa 15 daqiiqo oo baabuur ah Catalonia Caribe Golf Club iyo wax ka yar 7 kiilomitir u jirta Manati Amusement Park, haddii ay dhacdo inaad rabto inaad baxdo oo aad socod sameyso
Hoteel kale oo qurux badan oo loogu talagalay lammaanaha ayaa ah Sirta Cap Kaana Resort & Spa. Waxay u jirtaa 2 kiiloomitir iyo badh marinada Cap Cana, markaa magaca, markaa waad ku dhowdahay inaad sameyso ciyaaraha biyaha. Waxay kaloo leedahay casino, baarar, maqaayad iyo barkad lagu dabaasho oo bannaanka ah.
Waxa kale oo u dhow Jasiiradda loo yaqaan 'Dolphin Island', 'Blue Hole' iyo dhowr lagoon oo biyo macaan wata. Lamaane waqti xun kuma leh hoteelkan qaaska ah. Ugu dambeyntiina, hudheelo kale oo badan oo loogu talagalay lammaanaha, waxaa jira Sirta Royal Beach iyo Catalonia Royal Bavaro.
Midka hore wuxuu leeyahay naqshad casri ah wuxuuna ku fadhiyaa 640 mitir xeeb cad iyo geedo timireed. Waxay leedahay 641 qolal oo loogu talagalay dadka waaweyn oo keliya iyo kuwa aan sigaar caba, haddii aad bixiso xirmada raaxada waxaad ku nooshahay janno 24 saacadood maalintii. Catalonia waa isku mid, waxay leedahay xeeb gaar ah, barkado dabaal oo dhowr ah, laba koorso golf, casino, diskoo iyo maqaayado badan.
Hoteellada ugu wanaagsan ee qoyska ku yaal Punta Cana
Mararka qaar waxaad u safreysaa lamaane, marna caruur. Nasiib wanaagse, Punta Cana sidoo kale waa meel loogu talagalay safarka qoyska. Sidaa darteed, waxaa jira hudheelo leh qolal qoys iyo madadaalo loogu talagalay kuwa yaryar.
Tusaale ahaan, Kaydka Paradisus Palma Real. Hoteelkani wuxuu ka yaryahay 200 qolal, waana qaybta qoyska ee Paradisus Palma Real. Dhulku wuu ballaadhan yahay, jidadkiisuna badan yihiin, waxaa ku yaal meel lagu dalxiis tago oo haddii waalidku keli ahaantood raadsadaan sidoo kale waxay helayaan boosaskooda. Laakiin xiddiggu waa carruurta, sidaa darteed waxaa jira aag gaar ah oo iyaga loogu talagalay, oo leh boodbood iyo derbi fuula. daryeele, dalxiisyada maalin kasta iyo makhaayadaha leh liiska carruurta.
El Riyooyin Punta Cana Resort & Spa Ma aha hudheel raqiis ah, haddii aan isbarbardhigno kuwa kale ee aagga, laakiin taasi waxay ka dhigeysaa si sax ah inaysan ahayn hudheel dad badani ku badan yihiin. Ku barkad weyn waa soojiidasho qoysaska, runtiina waa mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn dalka. Waxaa jira madadaalo maalinle ah oo loogu talagalay qof walba iyo waxqabadyo badan: fasalo qoob ka ciyaarka, ciyaaro, farshaxanno, naadi sahamisa, dalxiisyada dabeecadda iyo haddii aad dhalinyaro tahay xitaa "Carruurta diskooga" habeenkii.
Ikhtiyaar kale oo ka mid ah hudheelada qoyska ee Punta Cana ayaa ah Huteelka adag Rock & Casino: Waxay ka kooban tahay 1790 qol, 13 barkadaha lagu dabaasho, 13 maqaaxiyo, 23 baarar iyo goob golf lagu ciyaaro oo ka kooban 18-god. Maxaa intaa ka badan, leeyahay casino ugu weyn ee Dominican Republic waxayna siisaa waxyaabo badan oo yar yar: wajiga rinjiyeynta, farshaxanada, fasalada karinta, riwaayadaha, qolka ciyaarta, barkad gaar ah oo loogu tala galay iyaga oo leh laba bog iyo wabiga caajiska ah, garoon golf yar iyo derbi fuula.
Ugu dambeyntii, Nickelodeon Hotel & Resorts, ee Uvero Alto. Waxay isku daraysaa madadaalada da 'kasta oo leh waxyaabo badan oo raaxo leh maxaa yeelay way leedahay 5 estrellas. Iyo haa, dib u eegista jilayaasha ku wareega Nickelodeon waa badan yihiin. Spongebob, Dabcan! Maxaa intaa ka badan, waxaa jira qolal mowduucyo lehs, Pinnapple Villa Suite, oo leh laba qol, seddex musqul iyo qurxinta Bikini Bottom.
Dhamaan Hoteelada Loo Dhan Yahay Punta Kana
Dhammaan hudheelada loo dhan yahay marwalba waa ikhtiyaar wanaagsan maadaama aad wax walba bixiso oo aad ku raaxaysato adigoon ka fikirin qarashyada dheeraadka ah. Meelaha Caribbean-ka loo tago ayaa si gaar ah ugu habboon arintan sababtoo ah qofku waqti badan ayuu ku qaataa xarumahooda.
El Qasriga Barceló Bavaro waa hudheel caan ah oo leh goob ku dayasho mudan: weheliyaan mid ka mid ah 10ka xeebood ee adduunka ugu fiican, sida ay qortay National Geographic. Xarumaha waa wax kasta oo aad ka filan karto hudheel silsiladan ah; Waad sameyn kartaa isboortiga biyaha sida snorkeling ama quusitaanka, ama kayaking, waxaad ku raaxeysan kartaa 11-ka makhaayado ama spa ama 24-ka saac casino, ama labada caweeyo.
Sidoo kale waxay leedahay koorso golf iyo xarun dukaameysi si aad uga siibtid kaarka deynta. Sida iska cad, way isku daraan bandhigyada habeenka iyo deegaan dabiici ah oo qurux buux dhaafiyay.
Waxaa ku xiga Hyatt Ziva Cap Cana, oo ku taal Plata Juanillo, oo dhawr kiiloomitir u jirta Madaarka Caalamiga ah ee Punta Cana.
Huteelkani waa mid weyn oo 5 xiddigood leh, sidaa darteed sidoo kale waxay la buux dhaafinaysaa adeegyo raaxo iyo adeegyo gaar ah. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu fiican ee hoteelka waa baarkinka biyaha oo leh bogag, biyo madfac, meelaha dashboardka, barkado da 'kasta leh, webi… Xeebta waa mid gaar ah oo waxaa ku yaal qorax-fadhiyo, dalladaha iyo qalabka isboortiga biyaha. Waxaa jira lix maqaaxiyo, rasmi ah iyo kuwo aan rasmi ahayn, iyo dhammaantood waxay ku jiraan dhammaan xirmooyinka loo dhan yahay.
El Iberostar Greater Bavaro Kaliya waxaa loogu talagalay dadka waaweyn laakiin waxaan ku dhejinay qaybtaan maxaa yeelay waa kuligood Naqshadeedu waa mid aad u qurux badan, waxay leedahay a harada dhexe iyo barkado badan, qolalka lagu riyoodo iyo afar makhaayadood oo aad u qurux badan si ay u cunaan cunnada caalamiga ah.
El Grand Reserve at Paradisus waxaa iska leh Melia Palma Real, luulka jasiiradaha Melia. Waa a shan xiddig huteel gudaha Bávaro, qolalku waxay leeyihiin balakoon gaar ah, oo leh nool iyo asturnaanta oo la hubo darbiyada iyo dabaqyada aan codka lahayn Haddii aad rabto raaxo badan markaa xulashadu waa Qolalka dabaasha ee dabaasha oo leh barkad si gaar ah. Waxa kale oo jira siddeed maqaaxiyo, jimicsi, xeeb gaar loo leeyahay, isboorti ...
El Mirage Majestic Halkan waa halka loo yaqaan 'Playa Gorda', oo u jirta masaafad u jirta laba seerood oo biyo ah. Qolalka waxaa ka mid ah balakoonno gaar loo leeyahay, barkadaha qubeyska, adeegga 24-ka saac, 13 barkadood oo leh fadhiyo u eg Bali, baarar, iyo Jacuzzis. Haddii aad ciyaarta tennis, markaa waxaa jira maxkamado, haddii aad jeceshahay habeenka, diskooga iyo bandhigyo.
Huteel leh Hawada Isbaanishka, qaabka gumeysiga, waa Resort Sanctuary Cap Cana taas oo ku taal Playa Juanillo. Waxay umuuqataa a qalcaddii hore, oo leh munaarado, laakiin inkasta oo ay tahay hudheel loo wada dhan yahay, haddana waxay ku dhacdaa qaybta «dadka waaweyn oo keliya».
Ugu dambeyntiina, waxaa jira Sare Punta Cana, shan xiddigle, oo loo dhan yahay iyo waliba dadka waaweyn oo kaliya. Haddii aad jeceshahay fikradda fuushan fardaha, hudheelkani waa weyn yahay maxaa yeelay wuxuu aad ugu dhow yahay Rancho Caribeño, oo ku takhasusay fuushan fardaha. Waxay leedahay jawi jacayl badan, lamaanayaal badan ayaa halkaan ku aqal gala.
Suurtagal maaha in la sameeyo liistada dhammaantood hudheelada ugu fiican Punta Cana. Way badan yihiin. Maanta qaar baa furan, borotokoollo lid ku ah iskudhafka, laakiin waxay soo mareen sanad aad u adag. Way badan yihiin waana lagugula talinayaa, sidaa darteed, inaad sameysid liistada dookhaaga kahor intaadan bilaabin raadinta.
Haddii aad la safarto lammaanahaaga, uma maleynayo inaad jeceshahay fikradda ah inaad ag joogto boqolaal carruur ah oo qeylinaya; Laakiin haddii aad la safreyso kuwa yaryar waxaad u baahan doontaa inay had iyo jeer madadaaliyaan oo dabcan, haddii aadan rabin inaad ka walwasho kharashyada aan xisaabsanayn, ujeedku waa in la doorto hudheel loo dhan yahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » America » Jamhuuriyadda Dominican » Huteelada ugu fiican Punta Cana